यी ६ चिज खान नजान्दा हुनसक्छ क्यान्सरको समस्या – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / यी ६ चिज खान नजान्दा हुनसक्छ क्यान्सरको समस्या
यी ६ चिज खान नजान्दा हुनसक्छ क्यान्सरको समस्या
admin August 15, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 153 Views
काठमाडौ । मानिसलाई लाग्ने घातक रोग उसको आनिबानी, खानपान र आहार बिहारकै कारण हो। हामी गर्छै वा जे खान्छौ त्यो खान वा गर्न नजाने त्यसैले ज्यान लिन्छ। हुन त सबैको घरमा हुने सामान्य प्रक्रिया हो एक समय पकाएको खाना फेरि तताएर खानु।
यो सामान्य लागेपनि कतिपय खानेकुरा फेरि तताएर खानु निकै हानिकारक हुन्छ । कतिपय यस्ता खानेकुरा पनि छन्, जुन पुनःतताएर खाँदा क्यान्सर जस्तो भयानक रोगको समेत खतरा हुन्छ। आज हामी त्यस्ता खाने कुराको बारेमा जानकारी दिन्छौँ।
कुखुराको मासुः कखुराको मासुलाई दोहोराएर तताएर खानु हानिकारक हुन्छ किनकनी यसमा पाइने प्रोटिन कम्पोजिशन पुनः तताउँदा बदलिन्छ, जसको कारण पाचन सम्बन्धी समस्या हुन्छ।
आलुः तरकारीको राज मानिने आलुलाई स्वास्थ्यबर्धक मानिन्छ। आलुको परिकारलाई लामो समयसम्म राख्दा यसमा भएको पोषक तत्व नास भएर जान्छ साथै आलुको परिकारलाई पुनः तताएर खाँदा पनि पाचन सम्बन्धि समस्या देखिन्छ।
चुकन्दरः चुकन्दरलाई पनि दोराएर तताउनु हुँदैन। यसको परिकारलाई पुनः तताउँदा यसमा पाइने नाइट्रट नाश भएर जान्छ।
च्याउः च्याउ सकेसम्म सधैँ ताजा नै खानुपर्दछ। च्याउलाई प्रोटिनको भण्डार नै मानिन्छ। पकाएको च्याउलाई फेरि तताएर खाँदा यसमो पाइने प्रोटिनको कम्पोजिसन फेरिन्छ जुन स्वास्थ्यको लागि निकै हानिकारक हो।
अण्डा र पालुङ्गो: त्यस्तै एक पटक पकाईसकेको खाने कुरा पुनः तताउन नहुने सूचीमा अण्डा र पालुङ्गोको साग पनि पर्दछ। यी माथि उल्लेखित खानेकुरा पुनः तताउँदा यसमा पाईन प्रोटिन नष्ट भई उत्पन्न तत्वले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ।
Previous युवतीले छातीलाई टाइट र आकर्षक कसरी बनाउने ?
Next के कारणले गर्भावस्थामै शिशु तेस्रोलिङगी बन्छ ? Posted on